Safidy loharano 12 ho an'ny famolavolana fampiharana | Famoronana an-tserasera
Loharano 12 ho an'ny famolavolana fampiharana
Firy ny fampiharana azonao amin'ny findainao? Raha tsy manana fampiharana toa ny Playstore sy iTunes, mahazatra an'ny fitaovana rehetra dia mety manana rindranasa mihoatra ny 3 alaina ianao.
Hifanaraka amiko ianao amin'ny fampiononana amin'ny fitetezana rindrambaiko noforonina tsara. Ny fisehoan'ny fampiharana finday Manamora ny fifandimbiasan'ny taranaka maro miditra amin'ny Internet (noho ny fahasarotan'ny fivezivezena) mifandray amin'ny tontolo virtoaly. Mazava fa ny famolavolana app Asa takiana io, ka izany no antony itondranay loharanom-pahalalana mahaliana anao amin'ity lahatsoratra ity.
1 Hevitra ho an'ny famolavolana fampiharana
2 Amboary ny fampiharana anao tsy misy programa
3 dia midika hoe
Hevitra ho an'ny famolavolana fampiharana
lamina iOS: pejy hahitana aingam-panahy sy fitarihana rehefa mandrafitra fampiharana. Ao anatin'izany no ananantsika fitambarana pikantsary misy ny fampiharana efa misy, izay azonay jerena (sy sintomina) avy amin'ny Playstore na iTunes. Tsara ny mamakivaky ireo sokajy misy azy ary mijery fampiharana hafa hahitana hevitra hampiharina amin'ny asantsika.
Lamin'ny finday: fiasa mitovy amin'ny tranokala teo aloha.
Pttrns: mitovy amin'ny roa teo aloha, miaraka amin'ny fahasamihafana misy zoom izay ahitanao ny pitsopitsony kely indrindra amin'ny endrika.
Amboary ny fampiharana anao tsy misy programa
Codiqa: afaka miasa amin'ny Internet na amin'ny solosainao ianao amin'ny alàlan'ny fampidinana ny tonian-dahatsoratra. Ny kinova maimaim-poana (fitsarana) dia maharitra 7 andro. 79 $ ny vidiny.
UI ranoka: miaraka amina tonian-dahatsoratra hita maso be dia be, hahafahantsika mamorona rindranasa tsy misy fahasarotana ary maimaimpoana. Mba hamonjy ny endriny dia mila misoratra anarana fotsiny ianao. Manomboka amin'ny $ 12 / volana ka hatramin'ny 49.
AppsBuilder: 15 € hamoahana fampiharana.
Mobincube: sehatra freemium izay ahafahantsika mamorona rindranasa nefa tsy mahafantatra ny fomba fandaharana. Drafitra isan-karazany.
Fanamafisana: mikendry ireo SME.
proto.io: afaka manandrana kinova maimaimpoana mandritra ny 15 andro isika. Aorian'ity fotoana ity dia mila manana kinova voaloa isika mba hahafahantsika mamoaka ny fampiharana. Raha hiteny fa manolotra loharanom-pahalalana sary isan-karazany kalitao ity pejy ity, ka mety ho safidy mahaliana izy io.
Trano bokotra- Tumblr iray manokana amin'ny fanangonana bokotra ho an'ny karazana fampiharana sy tranokala.
GUIToolkits: eto amin'ity pejy ity dia azonao atao ny mividy fonosana samihafa ho an'ny famolavolana fampiharana vita amin'ny loharanom-pahalalana isan-karazany. Azontsika atao ny misafidy amin'ireo programa samihafa izay hiasantsika taty aoriana (Photoshop, Illustrator ...) sy ireo sehatra.
Skala Preview: zahao mialoha ny volavolan'ny fampiharana anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Loharano 12 ho an'ny famolavolana fampiharana